WPML: Dudziro Yako WordPress Siti Neiyi Multilanguage Plugin uye Inesarudzo Dudziro Services | Martech Zone
WPML: Dudziro Yako WordPress Siti Neiyi Multilanguage Plugin uye Inesarudzo Dudziro Services
WPML ndiyo yakajairika muindasitiri yekuvandudza uye kududzira zvemukati pane mitauro yakawanda WordPress saiti. Parizvino ndiri kumhanya iyo GTranslate plugin pa Martech Zone kuti uite zvakapusa, mitauro yakawanda mitauro mushanduro. Izvi zvakawedzera kusvika kwedu pasirese pamwe nekutyairwa kwekutsvaga injini kunzvimbo yangu.
Tiri kushanda kuendesa saiti kune mutengi izvozvi izvo zvine huwandu hukuru hwevaSpanish. Nepo plugin yakaita seGTranslate ichigona kuita mushanduro mushe mushe, haisi kuzobata nuances yemutauro wevateereri vedu vazhinji veMexico-America vatinotarisira kusvika. Nezve izvo, isu tichave tichinyatso shandura izvo zvemukati kuti zvive zvakanyanya kukanganisa.
Shanduro yetsika inoda imwe mhinduro, uye mutungamiri muWordPress dudziro plugins iri WPML.
Maitiro Ekududzira Yako WordPress Siti neWPML
WPML Zvimiro Zvinosanganisira
WordPress - Dudziro yezvinhu zvese kuWebhusaiti yako saiti, kusanganisira kufamba, mawadhi, mapeji, zvinyorwa, zvemhando dzemhando dzepositi, kana chero chimwe chinhu. WPML inotsigirawo mupepeti weGutenberg.
Languages - WPML inouya nemitauro inodarika makumi mana. Unogona zvakare kuwedzera ako akasiyana emitauro (seCanada French kana Mexican Spanish) uchishandisa WPML's mitauro mupepeti.
Urongwa hwe URL - Unogona kuronga zvirimo mumitauro yakasiyana-siyana munzvimbo imwechete (mumitauro yedhairekitori), muma sub-domains, kana munzvimbo dzakasiyana zvachose.
Mashini Shanduro - Tora musoro wepamberi peshanduro yako uchishandisa mushanduri wekushandura kuti uchengetedze imwe nguva uye basa rekushandura rinodhura murwizi.
Shanduro yeMushandisi - Shandura vashandisi veWordPress kuita vashanduri. Vashanduri vanokwanisa chete kuwana yakatarwa mabasa ekushandura ayo Vanoshandura Mamaneja.
Dudziro Services - Unganidza manejimendi ane simba eWPML neshanduro yeshanduro yesarudzo yako. Tumira zvirinyore kushandurwa zvakananga kubva kuWPML's Dashibhodhi Dudziro. Kana shanduro dzapedza, dzinoonekwa zvekare pawebsite yako, dzakagadzirira kutsikiswa.
Dingindira uye Plugin String Dudziro - WPML inosunungura iwe kubva kunetswa yekugadzirisa mafaera ePO uye kurodha MO mafaira. Iwe unogona kududzira zvinyorwa mune mamwe plugins uye mune Admin skrini zvakananga kubva ku String Dudziro Interface.
WooCommerce Multilanguage Rutsigiro
Mhanya mitauro yakawanda e-commerce saiti neWooCommerce. Nakidzwa rutsigiro ruzere rwezvishoma uye zvakasiyana zvigadzirwa, zvine hukama zvigadzirwa, kutengesa uye kukwidziridzwa, uye zvese zvimwe zvinopihwa neWooCommerce.
WPML inokuratidza kuti ndeapi magwaro anoda kushandurwa uye inovaka yako yakazara yakashandurwa chitoro iwe. Vashanyi vanonakidzwa nekutenga kwakazara kwenzvimbo, kutanga neyekunyorwa kwechigadzirwa, kuburikidza nengoro uye kubuda, uye kunyangwe emunharaunda maemaimeri ekusimbisa.
Iwe haufanire kuita chero chakakosha kugadzira mitauro yakagadzirira mitauro yakawanda. Ingoshandisa iyo WordPress API mabasa uye WPML inotarisira zvimwe zvese.
Kuzivisa: Ndiri mubatanidzwa we WPML.
Tags: mitauro yakawandamitauro yemitauro yakawandamitauro yakawanda inobvumidza chimiroplugin dudziromabasa ekushanduraWooCommerce dudziroWordPressshanduro yeshokoWordpress dudziro pluginwpml